Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Fiji News Breaking » Dalxiiska Fiji oo ku dhawaaqay agaasime cusub
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Fiji News Breaking • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Brent Hill waxay u keentaa in ka badan 16 sano oo waayo -aragnimo ah dalxiiska iyo suuqgeynta dhijitaalka ah, xayaysiinta, sumadeynta, isgaarsiinta, ololaha, iyo istaraatiijiyadda fulinta Xafiiska Dalxiiska Qaranka ee Fiji.
Marka xaddidaadda xudduuddu ay fududaato oo safarku dib u bilowdo, Fiji waxay u baahan doontaa firfircooni iyo hal -abuur suuqgeynta lafteeda oo ah meel soo jiidasho leh, rabitaan leh oo ammaan ah.
Dib u soo celinta dhaqdhaqaaqa dalxiiska ma aha oo kaliya soo celinta shaqooyinka boqolaal kun oo Fijiyiin ah, laakiin waxay sidoo kale si weyn gacan uga geysan doontaa soo nooleynta dhaqaalaha iyada oo loo marayo saamaynta badan ee warshadaha.
Brent Hill wuxuu bedelayaa Agaasimihii hore Matt Stoeckel, oo xilkiisu dhammaaday Diseembar 2020.
Dalxiiska Fiji ayaa ku dhawaaqay magacaabista madaxa fulinta suuq geynta dalxiiska ee khibrada leh, Brent Hill oo ah Sarkaalka Fulinta Sare. Hill, oo ugu dambeeyay ahaa Agaasimaha Fulinta Suuqgeynta ee Guddiga Dalxiiska Koonfurta Australia, wuxuu khibrad ka badan 16 sano u leeyahay dalxiiska iyo suuqgeynta dhijitaalka ah, xayaysiinta, sumadeynta, isgaarsiinta, ololaha, iyo istaraatijiyadda fulinta Xafiiska Dalxiiska Qaranka ee Fiji. Wuxuu badalayaa agaasimihii hore Matt Stoeckel, oo xilkiisu dhamaaday December 2020.
Ka faalloonaya ballanta Hill, Dalxiis Fiji Guddoomiyaha Mr. Andre Viljoen wuxuu yiri: “Waxaan ku faraxsannahay inaan ku soo dhaweyno qof Brent oo kale ah doorkan muhiimka ah ee aan ahayn kaliya dalxiiska Fiji, laakiin dhaqaalaha Fijian. Brent wuxuu ka dhex muuqday habka shaqaalaysiinta oo aad u adkaa - oo uu bilaabay oo uu qabtay Guddigu iyada oo kaashaneysa PwC - in agaasime guud uu hoggaamiyo Dalxiiska Fiji waqtiyadan aan hore loo arag marka hawsha dalxiiska caalamiga ahi eber ahayd muddo sannad ka badan hadda. Khibradiisa la xaqiijiyay, waayo -aragnimada, iyo fikradaha dib -u -soo -nooleynta warshadaha ayaa ku habboon shuruudaha Fiji ee hadda. ”
Mr. Viljoen wuxuu raaciyay: “Marka xaddidaadda xudduuddu ay fududaato oo safarku dib u bilowdo, Fiji waxay u baahan doontaa firfircoonaan iyo hal -abuur xagga suuqgeynta lafteeda oo ah meel soo jiidasho leh, hammi leh oo ammaan ah. Waxaan ku jirnaa xaalad la mid ah meelaha kale ee dalxiiska firaaqada ee adduunka. Dhammaanteen waxaan u soconnaa suuqyo isku mid ah, kuwaas oo hadda ka yar kuwa awoodda kharashaadka ikhtiyaariga ah ee hooseeya. Brent aad baa loogu qaddariyaa warshadaha marka la eego waxqabadkiisa badan, waxaanan u baahnaan doonnaa xiriirkiisa ballaaran iyo xirfadaha maareynta oo ay weheliyaan la -hawlgalayaasha ganacsiga caalamiga ah si ay u suuqgeeyaan meesha aan u soconno, iyo xirfadihiisa isgaarsiineed ee aadka u wanaagsan si ay ugu soo ururiyaan warshadeena iyo daneeyayaasha ujeeddo guud. . Waxa uu si dhow diiradda u saari doonaa inuu la shaqeeyo Guddiga iyo mas'uuliyiinta caafimaadka ee aadka u kartida leh Fiji si loo soo celiyo hawlihii dalxiiska. ”
Wasiirka Dalxiiska Fiji, Mudane Faiyaz Koya ayaa sidoo kale soo dhoweeyay magacaabista Brent Hill ee ah Madaxa Dalxiiska Fiji, isagoo yiri: “Soo celinta waxqabadka dalxiiska ma aha oo kaliya soo celinta shaqooyinka boqolaal kun oo Fijiyiin ah, laakiin sidoo kale waxay wax weyn ka tari doontaa soo nooleynta dhaqaalaha saamaynta badan ee warshadaha. Waxaan hadda geeska u rogeynaa soo-dejinta barnaamijkeenna tallaalka qaranka annagoo sugeyna dib-u-soo-galidda suuqa oo dhaafsiisan suuqyadeenna dhaqameed. Tani waxay goob u tahay Mr. Hill iyo Dalxiiska Fiji inay Fiji ka dhigaan meesha ugu habboon ee kuwa diyaar u ah inay safraan. Waxaan sidoo kale ka fiirin doonnaa inuu ku lamaaneeyo qiyamkayaga caanka ku ah martigelinta dhabta ah ee Fiji, saaxiibtinimada iyo xaqiiqnimada dalabaadka iyo filashooyinka socdaalka casriga ah. Iyada oo Mr. Hill uu hogaaminayo Dalxiiska Fiji, waxaan nahay tallaabo u dhow inaan mar kale istaraatiijiyad ahaan u dhigno Fiji suuqa adduunka. ”